China na nzipu ngwa ngwa ọrụ ugbo otu-ogologo Plastic Ọwara Strawberry griin haus maka ọrịre-PTD001 ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Aixiang
Greenhouse Ọwara Dome
Na nnyefe ngwa ngwa ọrụ ugbo otu-ogologo Plastic Ọwara Strawberry Greenhouse Maka ire-PTD001
Ọwara griin haus bụ ụdị a na -ejikarị na ụdị griin haus dị n'ọhịa griin haus niile. Ndị ahịa n'ụwa niile na -eji ụdị griin haus a n'ihi usoro ya dị mfe, ọnụ ala dị ala, na obere mgbochi ụlọ. Dabere na ọtụtụ iri afọ nke nrụpụta griin haus na ịrụ ọrụ, griin haus ọwara nke AXgreenhouse mepụtara nwere ọnụ ala, usoro a pụrụ ịdabere na ya na ọtụtụ ngwa.
1.Simple Ọdịdị na ụdị greenhouses niile, dị mfe na ntinye na idobe ya.
2.Excellent ọkụ galvanized ígwè owuwu na ngwa, mgbochi corrosion. Afọ 15 na -eji ndụ.
Nkà na ụzụ bara uru na ihe nkiri PE, dị gịrịgịrị karịa. Emere ya nkwa afọ 5 iji ndụ.
4.Nkụkụ ikuku na ụgbụ ahụhụ nwere ike inye ihe ọkụkụ gị n'okpuru ọnọdụ ntụsara ahụ. Ịba ụba mkpụrụ.
5. Kukumba, tomato, na -amịpụta kwa 1000㎡ nke kariri 10000kg.
Ngalaba griin haus
Nlereanya Obosara Ogologo (m) Oghere dị n'etiti arches 2 Ogo Ubu Ogo ụlọ
AX-TF-006 6.0m Hazie 1-2.0m 1.2-2.0m 3.0-4.6m
AX-TF-007 7.0m Hazie 1-2.0m 1.2-2.0m 3.2-4.7m
AX-TF-008 8.0m Hazie 1-2.0m 1.2-2.0m 3.3-4.8m
AX-TF-009 9.0m Hazie 1-2.0m 1.2-2.0m 3.4-4.9m
AX-TF-010 Ogologo 10.0m Hazie 1-2.0m 1.2-2.0m 3.5-5.2m
Pipe Ibu ikuku Ibu snow Osisi nghọta ibu Mmiri ozuzo Ihe nkiri mkpuchi
Φ25/32/48/60mm maka nhọrọ 0.35KN/m^2 0.25KN/m^2 0.15KN/m^2 140mm/h 80-200micro
Tupu ire ere: Onye na-ahụ maka ịre ahịa ọkachamara na injinia na-enye gị azịza kacha mma.
N'etiti ire ere: Melite nkọwa maka ndị ahịa maka ịma iwu ha na-aga.
Mgbe irechara: Mezue vidiyo nwụnye na eserese. Injinia esenidụt dị maka iduzi nrụnye.
Ọdịdị dị elu nke na-ekpo ọkụ nke galvanized, ihe mkpuchi zinc 275 g/m2, ndụ ọrụ ihe karịrị afọ 20.
A na-achịkọta ihe nchara niile n'ọhịa, enweghị nhazi nke abụọ achọrọ.
Njikọ galvanized na fasteners anaghị agba nchara maka afọ 20.
Ihe nkiri PO/PE na-ekpuchi njirimara: mgbochi igirigi na mkpuchi ala, mgbochi mmiri, mgbochi mmiri, mgbochi ịka nká
Mgbasa ọkụ:> 89% mgbasa: 53%
Oke okpomọkụ: -40C ruo 60C
Sistemụ jụrụ oyi: Kpo akwa
A na -enweta jụrụ oyi nke griin haus site n'ụkpụrụ nke ikpochapu na mmiri jụrụ oyi. Mpekere jụrụ oyi pụrụ iche nwere ike hụ na mmiri na -agbachapụ mgbidi mpe mpe akwa niile. Mgbe ikuku na -abanye na mpempe akwụkwọ jụrụ oyi, ọ na -agbanwe ikuku na vepo nke mmiri n'elu mpe mpe akwa iji nweta iru mmiri na ikuku jụrụ oyi.
Usoro jụrụ oyi: Fan Exhaust
Ike: 1100 w
Voltaji: 380V, 50Hz, PH1
Olu ikuku: 44000 m3/h
Noise 60 decibel
Hot-mikpuo galvanized ígwè etiti, igwe anaghị agba nchara agụba
A na -ejikarị sistemụ ikuku ikuku maka mgbanwe gas n'ime na n'èzí griin haus. Iji mezuo ebumnuche nke ịhazigharị ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri na ịta CO2 n'ime griin haus.
Enwere ike họrọ akụkụ ikuku ma ọ bụ sistemụ ikuku dị elu dịka ihe ọkụkụ chọrọ.
Otu bụ sistemụ ikuku nke aka na nke ọzọ bụ sistemụ ikuku ikuku.
Sistemu ime ime
Mgbochi mgbochi na mgbochi mgbochi
Ịchekwa ume na mkpuchi
A na -ekewa ákwà ngebichi n'ụdị abụọ, ikuku na mkpuchi. A na -eji ụdị dị iche iche na ọnụego shading nke ákwà mgbochi dị ka achọrọ. Iji mee ka mmetụta mkpuchi dị na griin haus, enwere ike iji ụgbụ mkpuchi shading n'ime abụọ.
Sistemụ ndo nke mpụga
Isi ọrụ sistemụ a bụ ịjụ oyi na ndò n'oge ọkọchị, ka ìhè anyanwụ wee gbasaa n'ime griin haus iji hụ na echekwara ihe ọkụkụ ahụ ka anwụ ghara ịcha ya. Anti-UV, mgbochi mmiri mmiri, na-ebelata mbibi nke elu ụlọ griin haus.
Nke gara aga: Nnyocha dị mma maka China Hụrụ Nrụrụ Nha nha ụlọ na-emepe ikuku ikuku ọtụtụ-PMS001
Osote: China OEM China China Single Span/Commercial/Tunnel/Film Polycarbonate Farm Agriculture Greenhouse-PTG001
Griin haus Glass
Glass Geodesic Dome Greenhouse
Polycarbonate Dome Greenhouse
High ọwara tomato griin haus na ndo net, ag ...
Cheap price Grape griin haus China Commercial F ...
Ọnụ ala na mfe ịwụnye ụdị dome ụdị ọwara g ...
Ọrụ ugbo Singlespan/Ọwara griin haus na Irrig ...